Isingeniso Somkhiqizo Ipulatifomu yokulayisha nokwethula impahla iyithuluzi lokulayisha nokuthula lapho inkampani yethu ibhekisa kubuchwepheshe obuthuthukisiwe bangaphandle, kuhlanganiswe nemibandela yangempela yasekhaya, futhi kukhetha izingxenye ezithile ezingenisiwe. Ngemuva kokuklanywa ngokucophelela, ukukhiqizwa ngokucophelela, nokulayishwa okuzenzekelayo kwemishini, kulungele izidingo zomsebenzisi. Lo mkhiqizo unesakhiwo esizwakalayo, ukusebenza okuzinzile nokusebenza kahle komsebenzi. Ukuhamba yisici esikhulu kunazo zonke epulatifomu. Kuyimi...
Isingeniso Somkhiqizo Ibhuloho lokugibela elingashintshi liyisetshenziswa esikhethekile sokusiza ekulayisheni okusheshayo nasekulayisheni izimpahla. Ifakwe emapulatifomu nasezakhiweni futhi ixhunywe egumbini lamaloli ukulungisa umehluko wokuphakama phakathi kwepulatifomu, indawo yokwakha negumbi. Ijoyinti elibuyisekayo lesiphetho elingaphambili ekugcineni kwebhuloho lokugibela lihlala liseduze kwekalishi lapho kulayishwa futhi kuthulwa impahla. Umsebenzi wokulungiswa kwe-engeli kwebhuloho lokugibela unika amandla i-b ...
Isingeniso Somkhiqizo Ipulatifomu yokuphakamisa isebenzisa isakhiwo sefreyimu yensimbi noma isakhiwo sensimbi yensimbi enamandla amakhulu, esinamandla okuthwala asukela kumathani ayi-0.1 kuye kwayi-100. Usayizi womkhiqizo nosayizi wemishini kungenziwa ngezifiso ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi. Imodi yokusebenza ingahlukaniselwa ekulawulweni okuphezulu nangaphansi nokulawulwa komuntu oyedwa phansi, kanye nephoyinti lokukhomba nokwehla, isilawuli semigqa eminingi. Yesikhulumi wokubacindezela wokubacindezela eziklanyelwe ukuhlangabezana speci ahlukahlukene ...
Isingeniso Somkhiqizo Ipulatifomu yokulayisha nokwethula impahla iyithuluzi lokulayisha nokuthula lapho inkampani yethu ibhekisa kubuchwepheshe obuthuthukisiwe bangaphandle, kuhlanganiswe nemibandela yangempela yasekhaya, futhi kukhetha izingxenye ezithile ezingenisiwe. Ngemuva kokuklanywa ngokucophelela, ukukhiqizwa ngokucophelela, nokulayishwa okuzenzekelayo kwemishini, kulungele izidingo zabasebenzisi. Lo mkhiqizo unesakhiwo esizwakalayo, ukusebenza okuzinzile, nokusebenza kahle komsebenzi. Ukuhamba yisici esikhulu kunazo zonke zeplatf ...
Imisebenzi Yokucwatshwa Kwaphezulu Nangaphandle Futhi Ukuwela Umshini we-boom ocacile unikeza imisebenzi enezici eziningi yokubeka phezulu, ngaphandle nangaphezulu, ukuze ukwazi ukufinyelela kunoma iyiphi indawo ofuna ukuyidlula ngezindlela ezahlukahlukene. Qedela ukumiswa kwamadivayisi wokuphepha indude ngamadivayisi anesisindo esinezixhumanisi ezine, ukuvikela ngokweqile, idivaysi yokuthola ezenzakalelayo yokuthola ubukhulu beplatifomu nokuphakama (i-othomathikhi ye-amplitude limiter), ukulawula okuzenzakalelayo kwejubane lokuhamba kwe-boom ne-tr ...
Isingeniso Somkhiqizo Uchungechunge lwengalo yokuphakamisa lunezinzuzo zesakhiwo esihlanganisiwe, kusetshenziswa uhlobo olusha lwensimbi esezingeni eliphakeme, amandla aphakeme, isisindo esincane, ukufinyelela ngqo kumandla we-AC ukuqala, ukusetha ngokushesha, izinyawo zokwesekwa kwe-hydraulic okuzenzakalelayo, kungasethwa ngokushesha ukusebenza okuphephile nokulula. Itafula elisebenzayo lingaphakanyiswa futhi ubude besandiso obuningi bukhulu, futhi indawo yokusebenza iyanda; nengxenyekazi ingazungeziswa. Kulula ukuwela izithiyo futhi ufinyelele endaweni yokusebenza, yi-id ...
Isingeniso Somkhiqizo Isiteji sokuphakamisa umkhiqizo osetshenziswa kakhulu esiteji. Umsebenzi wawo omkhulu ukuhambisa isethi nabalingisi phezulu naphansi lapho kushintshwa izigcawu. Ngaphezu kwalokho ngenhloso yokuqhakambisa abalingisi abaqavile, inkundla izonyuka kancane, nabalingisi bazodansa esiteji, bakhe phezulu naphansi esiteji. Ngasikhathi sinye, inqubo yokuphakamisa isigaba nayo ingakhuphula umphumela wokusebenza. Ukuze kuhlangatshezwane nokulawulwa kwengqondo kwesigaba sokuphakamisa umfutholuketshezi, izinzwa ezingathintwa ...
Incazelo yomkhiqizo Lapho ipulatifomu yohlobo lokuphakamisa uhlobo lwe-crank iphakanyiselwa kunoma yisiphi isikhundla, ingasebenza ngenkathi uhamba. Inesakhiwo esihlangene nokuqondisa okuguqukayo. Ububanzi bomhlabathi wayo bungaqinisekisa ukuthi imishini ingena ephaseji elincane nezindawo zokusebenza eziminyene. I-unit yamandla yokulinda, ukusethwa kabusha kwesikhulumi sokusebenza, imodi yokuhamba elula, ingadonselwa kunoma iyiphi indawo. Iphaneli yokusebenza elula ukukhonjwa, ukuvikelwa kokuphepha okuningi kwemishini, kagesi nokubacindezela, ukuhlanganisa okuthuthukile ...
I-Aluminium Alloy Phakamisa ipulatifomu yohlobo lwe-Aluminium Ingxubevange enamandla aphezulu nekhwalithi ephezulu ye-Aluminium Alloy material, inezinzuzo zokubukeka okuhle, usayizi omncane, isisindo esincane, ibhalansi yokuphakamisa, iphephile futhi inokwethenjelwa, inkundla yayo yomshuwalense egqoke intambo yocingo nedivayisi yokuvikela ukuphepha, futhi ingasebenza, isetshenziswe kabanzi emafektri, amahhotela, izindawo zokudlela, izikhumulo zezindiza, iziteshi, izinkundla zemidlalo, ihholo lombukiso nezinye izindawo, ingadlula jikelele futhi iphakamise, kulula kakhulu ukuyisebenzisa. ...
Umkhiqizo Isingeniso Isikere esizihambisayo sisebenza ngomshini wokuhamba othomathikhi, idizayini edidiyelwe, amandla ebhethri akhelwe ngaphakathi, ahlangane ngezimo ezihlukile zokusebenza, akukho ukunikezwa kwamandla wangaphandle, akukho kudonswa kwamandla angaphandle okungaphakamisa ngokukhululeka, futhi okokusebenza nokugijima futhi umuntu nje angaqedwa. U-opharetha udinga kuphela ukuphatha isibambo sokulawula entweni yokusebenza ngaphambi kokusebenza okuphelele phambili nasemuva, ukuqondisa, ukushesha, ukuhamba kancane nokwenza okulinganayo. ...
Isingeniso Somkhiqizo Lolu chungechunge lwe-proudcts lunokuphakamisa ukuphakama kusuka ku-4m kuye ku-18m, futhi kulayishwa isisindo kusuka ku-300kg kuye ku-500kg, ngemodi yokuphakamisa yokusebenza ngesandla, ugesi, ibhethri no-oyili kadizili, njll. ; susa ipulatifomu yedivayisi yokulawula ingafakwa ngokuya ngezidingo zabasebenzisi, ezinezinzuzo ezibandakanya ukuhamba kalula, indawo enkulu namandla okuthwala aqinile, okuvumela ukusebenza ngasikhathi sinye kwabantu abaningana, nokuphepha ...
Umkhiqizo Isingeniso Crawler ikheshi yethu yakhelwe ngokukhethekile ensimini umsebenzi wasemoyeni ngaphansi kwezimo zomgwaqo eziyinkimbinkimbi ze-aluminium ingxubevange lift, inamandla ikakhulukazi amandla eguquguqukayo, kungabikho mandla endle, umsebenzi ophezulu ngaphezu kwezimo eziyinkimbinkimbi zethrafikhi. Isebenzisa amasondo okukhasa, i-chassis ebhebhethekisayo, eqhutshwa ukuhamba kwedizili yenjini, yenza ukulawula nokuphakamisa ibhethri lamandla, ngenkinobho yokulawula ukulawula izikhukhula phezulu naphezulu, ungasebenzisa futhi injini kadizili njengokuphakamisa amandla ...